Wararka - Maxaa loogu farxaa?
Kani waa badeecadeena cusub ee qaabeynta cusub. Boorsada ayaa laga sameeyay caag balaastik ah. Lakabka kore (polyamide + polyetylen) wuxuu ka ilaaliyaa oksijiinta iyo qoyaanka; cufnaanteeda iyo halabuurkeedu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadba baahida macmiilka ama sheyga. Lakabka gudaha (polyetylen) waa mid laastik ah una adkaysanaya jeexitaanka.
Haddii aad hayso codsi kale, waxaan hagaajin karnaa maaddada ay noqonayso gidaar sare ama gidaar fudud. Tilmaamaha caadiga ah ayaa ah 5 L, 10 L, 18 L iyo 20 L. Waxaan diyaar u nahay inaan u fidino macaamiisha shaybaarro bilaash ah.
Waxaan sidoo kale leenahay mashiinka buuxinta bacda sheeriga loogu rido sanduuqa. Haddii aad xiiseyneyso, waxaan kuu soo diri doonnaa macluumaad dheeraad ah.
Waxaan isku darnaa faa'iidooyinka deegaanka ee baakadaha-sanduuq-dhaqameedka iyo qaar badan oo ka mid ah
faa'iidooyinka waxqabadka weel adag.
Baaxad ballaadhan oo loogu talagalay isgaadhsiinta garaafka. Sanduuqa ayaa qaab loogu talagalay. Maaddaama ay ka samaysan tahay kartoon, dhammaan dhinacyada waa la daabacan karaa, taas oo siinaysa aag dusha sare ee isgaarsiinta.